musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Myanmar Breaking Nhau » Hondo Dziviriro Yevanhu muMyanmar: Chiziviso Chepamutemo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Myanmar Breaking Nhau • nhau • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Myanmar inozivisa hondo
Dhipatimendi rekuyedza muMyanmar (Burma) yekumisa kutora kwemauto uye nyonganiso zvakakundikana, kunyangwe zvirango kubva kunyika dzekuMadokero nekumanikidzwa kubva kuSoutheast Asia vavakidzani.
Nhasi "Hondo yevanhu yekudzivirira" yakaziviswa neMyanmar National Unity Government.
National Unity Government (NUG) yeMyanmar yakazivisa kuvhurwa kwevanhu kuzvidzivirira kurwisa junta yenyika yose neChipiri mangwanani.
Mutevedzeri wemutungamiriri weNUG weDuwa Lashi La akakurudzira vagari venyika yese kuti "vapandukire hutongi hwemagandanga emauto anotungamirwa na [mutungamiriri wekupidigura] Min Aung Hlaing mukona dzese dzenyika."
Vazivisa State yeEmergency munyika kuti vabvise hudzvanyiriri hwemauto.
Mumvuri hurumende yeMyanmar yazivisa "vanhu vanodzivirira hondo" kurwisa mauto enyika, ayo akatora masimba mukutora muna Kukadzi 1.
Duwa Lashi La, mutevedzeri wemutungamiriri weNational Unity Government (NUG), yakaumbwa nevamiriri vemitemo, vakazivisa muvhidhiyo yakatumirwa paFacebook neChipiri.
Akadana mutungamiri wemauto gandanga kana achiunganidza Peoples Defense Force.
Nebasa rekuchengetedza hupenyu nezvivakwa zvevanhu, Hurumende Yenyika Dzekubatana… yakatanga hondo yevanhu yekudzivirira junta yemauto, ”akadaro.
"Sezvo uku kuri kuita veruzhinji, vagari vese mukati meMyanmar yese, vanopandukira hutongi hwemagandanga emauto anotungamirwa naMin Aung Hlaing mukona dzese dzenyika."
Myanmar yanga iri mumhirizhonga kubvira kubvuta masimba kwakatungamirwa naMukuru General Ming Aung Hlaing. Kubata simba kwakakurudzira kuratidzira kwakapararira uye kufamba kwevanhu vasingateerere, asi mauto ezvekuchengetedza akapinda nechisimba nechisimba, achiuraya mazana nekusunga zviuru zvevanhu.